आमालाई पिटेर फर्काइयो, बुबालाई दर्शक बनाइयो ! को थिए ती ‘देवता’ जसले राधा चौधरीलाई बचाए ?
फागुन २८, काठमाडौं।
कैलालीमा घटेको अमानवीय घटनाले देशबर निक्कै खैलाबैला मच्चियो, गाउँदेखि संघीय संसदसम्म समेत उक्त घटनाले स्थान पायो ।
त्यो हो कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित देउकलियाकी छात्रा राधा चौधरीमाथि घटेको घटना । बिहीबार देशभर धुमधामसँग अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहेका थिए । पुरुषहरुले पनि महिलालाई समान व्यवहार गर्ने मात्र होइन, महिला हिंसाविरुद्ध हातमा हात मिलाएर लड्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
तर, कैलालीको घोडाघाडी नगरपालिका-५ देउकलीमा भने २० वर्षीया एक युवती भने लगातार ६ घन्टासम्म कुटपिटमा परिन् । आफूलाई भोले बाबा बताउनले ताण्डव नृत्य देखाइरहँदा सिंगो वस्तीका मानिस घेरा हालेर रमिता हेरिरहे । राधामाथि यति ठुलो जघन्य अपराध हुँदा उनका आमाबुवा कहाँ थिए ?
बोक्सीको आरोपमा राधामाथि भएको कुटपिटबारे खोजतलास गर्दै जाँदा घटनाका अनेकन पहेली बाहिर आउन थालेका छन् । राधामाथि कुटपिट भएकै दिन बोक्सीकै आरोपमा एक जना शिक्षिकामाथि समेत कुटपिट भएको तथ्य फेला परेको छ । झाँक्री रामबहादुरसँग जोखाना हेराउन एकजना पत्रकारसमेत आफ्नी आमालाई लिएर घटनास्थलमा पुगेको अर्को तथ्य खुलेको छ ।
गत विहीबार इञ्जिनियर/पत्रकार चौधरीकाे घोडाघोडी रेडियोमा कार्यरत अर्का एकजना पत्रकार साथीसँग भेट भयो । ती पत्रकार आफ्नी बिरामी आमालाई उपचार गराउनका लागि देउकलियास्थित झाँक्री रामबहादुर चौधरीको घरमा जान लागेका रहेछन् ।
आफूहरु त्यहाँ पुग्दा राधामाथि कुटपिट भइरहेको र आफूहरु फर्कंदा पनि त्यो जारी नै रहेको चौधरीले बताए । यस्तो बेलामा भिडियोमात्रै खिच्नुभयो ? कुटपिट गर्नुहुँदैन भनेर प्रतिवाद गर्नुभएन ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा पत्रकार चौधरीले भने, त्यहाँ बोल्न सक्ने स्थिति नै थिएन, बोल्यो भने स्थानीयवासीले झम्टिने अवस्था थियो ।’
बोक्सीको आरोपमा पिटाइ खाने पीडित शिक्षिका हेमा चौधरी हुन् । उनी स्थानीय सप्तश्री बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछिन् । हेमालाई पार्वती भन्ने कस्मती चौधरीले रामबहादुरको घरमा बोलाएकी थिइन् र तँ बोक्सी होस् भन्दै कुटेर पठाइएको थियो । स्थानीयवासी भएका नाताले हेमा र किस्मती चिनजानका दौंतरीजस्तै हुन् ।